Akukho mfihlelo yokuba ubulili obufanelekileyo kubaluleke kakhulu ukuba ube nesibalo esincinci. Abasetyhini abaninzi abanakuzikhangela nantoni kunye nexesha lokuya kwiiklasi kwiinkqubo zentlalo kunye namaqela empilo. Nangona kunjalo, ukukrazula ukukhululeka kunokwanele nje ukuba ufumane uqeqesho oluqhelekileyo. Kwakhona kuyimfuneko ukufezekisa umzimba ngokuchanekileyo. Umzekelo, ngaba uyazi ukuba yeyiphi indlela ekufuneka isetyenziswe ekulahlekeni kwindleko esheshayo? Ngaba uyazi ukuba zingaphi ukuphindaphinda komsebenzi ngamnye kufuneka kwenziwe kwiseshoni enye yoqeqesho? Hayi? Kule meko, kucetyiswa ukuba ufunde okunye malunga nendlela yokuqhuba umzimba ukuze ufezekise ukulahleka kwesisindo.
Umnqweno wesiphi na umfazi ukufezekisa ukuqonda kunye nokuqonda kuyaqondakala kwaye kuyaqondakala kakuhle - emva koko, wonke umntu ufuna ukujonga omncinci, obalaseleyo, okhangeleka ngakumbi ngesini esahlukileyo. Ukunciphisa ubunzima ngokususa "iikhilogram ezingaphezulu" kuya kunceda ukufezekisa ezi njongo. Nangona kunjalo, ukugqiba ukubhalisa kwiklabhu yezemidlalo ukuze ufumane ukulahlekelwa kwesisindo, kufuneka ucinge ubuncinci bendlela yokusebenzisa kakuhle.
Ikhetho elifanelekileyo labaqalayo liya kuba kuqeqesho olulolu hlobo, oluqhutywa ngendlela ehlelekile kwaye phantsi kweliso lweengcali. Kule meko, akufanele ukhathazeke malunga nendlela yokulungelelanisa kakuhle zonke izigaba zokuqeqesha kunye nokuzilolonga okumele kwenziwe. Ukongeza, unako ukuqhagamshelana nomqeqeshi ngokubonisana, uthathe isigqi sokwenza umzimba, oya kukunceda ufezekiswe ngokukhawuleza kwinqanaba.
Ukuba icandelo oya kutyelela li-gym elula, apho wena ukhetha i-inventory ukwenza iimvavanyo eziyimfuneko, kufuneka ulandele imigaqo ethile. Ukuqhuba uqeqesho ukufezekisa ukulahleka kwemilinganiselo kubandakanya ukusetyenziswa kwamanani amaninzi okuphindaphinda kwindlela nganye. Kwiiklasi zokuqala, zama ukwenza ubuncinane iindlela ezintathu zokusebenzisa umzimba. Ubunzima owukhethayo kwiimimulators kufuneka kukuvumele ukuba wenze ubuncinane ukuphindaphinda kwe-12 ukuya kwe-15 kwindlela nganye. Akuyimfuneko ukugxotha iinqwelo ezinkulu zeempahla kwiimimulators - le ndlela ikulungele ukwakhiwa kwamandla kunye nobukhulu bomzimba. Kwaye ekubeni iinjongo zakho eziphambili kukunciphisa ubunzima bomzimba, khumbula: ukuphindaphinda okuphindaphindiweyo komzimba ngamnye ongayenzayo, i-fatty deposits iya kukwazi ukuyidla ngexesha elinye.
Ekusebenzeni okulandelayo (njengoko izinga lakho lokuqina emzimbeni landa), zama ukunyusa inani lokuphindaphinda kulo msebenzi ngamnye ukuya ku-20 ukuya ku-25. Le nombolo yokuphindaphinda izanele ngokweenkqubo zokuqeqeshwa ukuphumeza ukulahleka kwesisindo. Ukuba wenza izivikelo zesisu zomzimba (ukutsalwa kwesikhumba, okanye, njengoko kubizwa ngokuphindaphindiweyo, "ukuguqula isigxina"), ngoko inani lokuphindaphinda lifanele lifikelele kwinani elingenakwenzekayo kuwe, ngaphandle koko loo misipha ayiyi kufumana umthwalo ofanelekileyo. Kwimeko apho unako ukwenza inombolo enkulu kakhulu yokuphindaphinda kulo msebenzi (umzekelo, ngaphezu kwamashumi amahlanu) ngaphandle kokukhathala kakhulu, uzama ukuthatha umthwalo omncinci uze uyibambe ngezandla zakho emva kwekhanda lakho ngexesha lokuhamba kunye nokwandiswa kwesiqu.
Ubungakanani bexesha lokusebenzisa umzimba ngexesha loqeqesho lokunciphisa ubunzima akufanele lidlulele i-1 - 1.5 iiyure ngosuku. Ukugqithisa ngeli xesha ngokuzikhandla ngokomzimba kunokukhokelela ekugqibeleni umzimba kunye nokuphuhliswa koburhulumente.
Kwiiholo ezininzi zezemidlalo kukho izikali apho bonke abanomdla banokulinganisa umzimba. Nangona kunjalo, ukuba ulinganiswe ngaphambi nangemva kokuzivocavoca, uya kufumana ukuba ubunzima bomzimba wakho buyeke, uthi, i-300 grams, ngoko akufanele udibanise. Isabelo seengonyama salesi sixa siya kuba kukulahlekelwa kwamanzi ngokukhupha okukhulu. Amanzi aya kubuyela emzimbeni wethu emva kokusela kokuqala kweglasi yamanzi amaminerali okanye ijusi. Enyanisweni, ukunciphisa ubunzima, obunokufezekiswa kumsebenzi omnye, kukuthi, ekugqithiseni, ngamashumi amabini amagremu. Ngako oko, ngenxa yempembelo yokulahleka kwesisindo, zama ukuza rhoqo kwiiseshoni zoqeqesho kwaye wenze ngokufanelekileyo zonke izivivinyo zomzimba.
Indlela yokwenza inkqubo yakho yoqeqesho kwi simulator?
Ukunciphisa umthamo, ukulungiswa kwamanani
Ukugijima njengemidlalo ebalulekileyo kakhulu kwaye ifumaneka
Amacube kunye nokulungiswa kwemifuno
Iphupha le-strawberry ntoni?
Izimfihlelo zobuhle ukusuka kuLarisa Guzeeva
Indlela yokuzijonga ngayo kwiintsuku ezingama-30: 4 imigaqo esebenzayo kubantu abacebileyo
Indoda enqabileyo iyakoyika ukuhlangana
Iimpawu eziwusizo zemidiliya
Umbutho womtshato, ugcine
I-cocktail elula kunye ne-cranberries
I-Pepper enezinto zemifuno
Luhlobo luni lwemidlalo olufanelana nawe?